Umshini wokusika we-CNC, owaziwa nangokuthi njengezinto ezihlakaniphile zemishini yokukhiqiza ifenisha. Njengoba igama lisho, zonke izinqubo ezivela ukulayisha, ukusika, ukumba umgodi okuqondile nokufakwa kuhlu kwepuleti kuqediwe ekuhambeni okukodwa. Ibeka ngokuphelele indawo yokukhiqiza nokucubungula. Ngakho-ke, iziphi izinzuzo ezibalulekile namasu wokucubungula womshini ongenalutho we-CNC wemishini yokwenza ifenisha yendabuko? Namuhla inkampani ye-Jinan JCUT CNC imishini ithatha imikhiqizo yefektri yethu njengesibonelo sokuyethula kuwe ngemininingwane.
1. Umshini wokusika we-CNC ungathuthukisa kakhulu isilinganiso sokusetshenziswa kwamapuleti. Idizayini yefenisha igcwaliswa ngokuphelele yikhompyutha. Ngokwefenisha eyenzelwe lokho, idatha yokusebenzisa ibhodi ingatholwa ngqo, bese ibhodi lingasikwa futhi licutshungulwe ngokusebenzisa isoftware yokwenza kahle eyenziwe kahle. Izinga lokusebenzisa liphezulu kakhulu, lifinyelela kuma-95%; Umshini wokusika usebenzisa i-milling cutter yokusika, engaphenduka kunoma iyiphi indlela futhi usike amajamo akhethekile. Ithebula le-sliding yendabuko yendabuko kufanele lisikwe ekugcineni, futhi isilinganiso sokusetshenziswa kweshidi liphansi kakhulu. Umnumzane wethebula elishayayo ubone ukukala nokusika kwetheyipu ngokusho imidwebo.
2. Umshini wokusika we-CNC usindisa izindleko zabasebenzi. Umugqa wokukhiqiza ifenisha othomathikhi ungasebenza ngokuphelele futhi usetshenziswe ngumuntu oyedwa, futhi uma kusetshenziswa umugqa wokujikeleza webhendi onqenqemeni, isisebenzi singasebenza ngokugcwele futhi siyisebenzise kusuka ekusikeni kuya ekucijeni ibhendi. I-sliding table saw idinga okungenani abasebenzi ababili ukuba basebenze, okungenani inkosi eyodwa ihola ukuqeqeshelwa umsebenzi, futhi amandla okusebenza aphezulu, futhi ukuphathwa kwabasebenzi abanamakhono nakho kunzima. Ihlobene nokuhanjiswa kosuku, ayikwazi ukubamba ingxenye eyodwa kwezintathu yokuvula kwe-CNC.
3. Ijubane lokucubungula lomshini wokusika we-CNC likude kakhulu uma liqhathaniswa ne-sliding yetafula elibonakalayo. Umugqa wokukhiqiza ifenisha othomathikhi uyinqubo eqhubekayo futhi engaphazamiseki, kanye ne-CNC yokusika okuzenzakalelayo; ngenkathi itafula elishayayo labona lidinga ukuqhutshwa futhi limiswe, bese ibhodi ligudluzwa nxazonke, okuwukuchitha isikhathi nomsebenzi. Uma iguqulwa ngokungafanele, izinga lephutha liphezulu kakhulu.
4. Imvelo yokusebenza yomshini wokusika we-CNC muhle kakhulu. Ithuluzi elinamandla lokufaka uthuli lomshini wokusika kanye nesakhiwo samathuluzi esisetshenzisiwe semishini sekusondele ukufeza ukucubungula okungenathuli; ukukhuluma, uthuli lwetafula elishelelayo likhulu kakhulu.
5. Umshini wokusika we-CNC wamukela ukusebenza nokusebenza kweziwula, konke kubalwa ikhompyutha, nge-zero ukwehluleka nephutha le-zero. Ukusebenza kulula. Ngemuva kokuqeqeshwa okulula nguchwepheshe wethu, kungasetjenziselwa ukusebenza, futhi kuphephile futhi akunabungozi. Ithebula le-sliding meza lisebenzisa ukubalwa kwemibhalo ukugwema amaphutha ahlukahlukene. Ithebula le-sliding yetafile liyingozi kakhulu futhi alilungile kancane. Kungadala ukulimala komuntu.
Konke kukho konke, kungaba kusuka ezindlekweni zokucubungula, noma ikhwalithi yokucubungula, ubuchwepheshe bokucubungula umshini wokusika we-CNC abunakuqhathaniswa yi-saw sliding yetafula. Lokhu futhi kuyimpande yomshini wokusika weCNC aziwa kakhulu ngamakhasimende.